Iingcamango ezili-10 eziGrey kunye neZimhlophe zokuhlambela ngo-2018 - Amagumbi Okuhlambela
Iingcamango ezili-10 eziGrey kunye neZimhlophe zokuhlambela ngo-2018
Ngokunyanisekileyo kwe-Erin Gates Design
Sonke malunga nomdibaniso omnyama nomhlophe weklasikhi, kodwa ngamanye amaxesha, onokuziva umnyama kakhulu kwigumbi lokuhlambela. Ufuna zonke ezo vibes ezikhanyayo kunye nomoya, ke lixesha lokuba cinga ngwevu . Ngokwayo, inokuziva ngathi iyiblah encinci, kodwa uyidibanise nomhlophe kwaye ubone ukuba ithambile kwaye ithomalalisa indlu yakho yokuhlambela.
Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi1 Jungle-ephefumlelweyo Indlu entle
Le ndawo yokuhlambela iphefumlelwe nge-spa ifumana iitoni zomlinganiswa kumgangatho wethayile kunye nephepha lodonga lesundu. Siyafa ngaphezulu kwesitulo sesundu sobhedu.
Mbini Scallop kumgangatho wakho Ngokunyanisekileyo kweTessa Neustadt kaEmily Henderson Designs
Iithayile ze-scalloped kule ndawo yokuhlambela zinceda ukuthambisa umgangatho omnyama ongwevu. Ukongeza umahluko, tshintsha iithayile zakho zeshawari.
3 Yiya kule mihla Ngokunyanisekileyo kwe-Veneer Designs
Le bhafu emhlophe emhlophe idlala eludongeni oluyi-grey ngendlela engazolanga iliso. Ibhonasi? Ibhafu edadayo yeyona nto iphambili ekuphumleni.
izimvo ezincinci zegumbi lemidlalo yeqonga
4 Indlu yasefama edityanisiweyo enale mihla UTREVOR TONDRO
Iithayile zomgangatho wesamente zithatha ingwevu kwaye zongeze inani elifanelekileyo lepateni kule bhafu iphantsi. Bayaphola kwaye batsha ngeenyawo ezingenanto, ke igumbi linobunewunewu, kodwa ngendlela yangoku, ekhululekile.
5 Sebenzisa iitawuli zakho UNathan Kirkman
Ngaba yeyona ndlela ilula yokongeza umbala kwigumbi lokuhlambela elingathathi hlangothi? Iitawuli zakho. Ungabatshintsha ngaphandle kwexesha, kuxhomekeke kumbala okwiimeko zakho.
6 Glam It Up Ngokunyanisekileyo kwe-Erin Gates Design
Phila obona bomi bakho bumnandi kwaye wongeze ikhandlela. Yenza igumbi lokuhlambela elithulisiweyo ngenye indlela live kamnandi.
Bona ngakumbi kwi U-Erin Gates .
7 Dlala ngePateni UPeter Murdock
Awusebenzisi umbala ongqindilili, ke ukusebenzisa ipateni enesibindi kulungile. Le migca igubungela umgangatho kunye neshawa yempembelelo enkulu.
8 Zama udonga oluvakalayo UKaryn M. Millet
Ukuba umhlophe kunye nengwevu uziva ngathi uyigubu-elinobunkunkqele kuyilo lwakho, yongeza udonga lwesitayile esimbala okhanyayo. Yithintele eludongeni olunye ukuze ingongamele igumbi.
9 Ukuphola okwangoku UPaul Raeside
Kwindlu entle yeHamptons, ibhafu yokuhlambela ine-Wetstyle tub yokuziva unekamva. Ngwevu umbala wombala omhlophe ugcina ukuziva uzolile.
10 Yongeza i-Shine UBruce Buck
Kwigumbi lokuhlambela lesiXeko saseNew York, i-mosaic tile ine-peylescent. Izikrelemnqa zeediliya kunye nokulungiswa kwe-nickel kulungelelanisa umgangatho nodonga.
izityalo ezincinci zangaphakathi ukukhanya okuphantsi
Isipho sosuku lweValentine kuye
Eyona mibala ipeyinti yokutyela